जनतापाटी आइतवार, असार ७, २०७७, ०८:००:०० मा प्रकाशित
अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ भन्ने कुरा नौलो रहेन । यसै पनि कमजोर रहेको नेपालको अर्थतन्त्र र सम्पूर्ण विकास प्रकृयालाई कोरोना भाइरसले जगैदेखि हल्लाइदिएको छ । रोजगारी र उद्यमशिलताका आधारहरु लथालिंग भएका छन् । विदेशबाट आउने विप्रेषण घटेको छ र त्यसले खासगरी मध्यम वर्गिय नेपालीको आर्थिक हैसियतलाई खुम्चाइदिएको छ ।
समग्रमा देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ । र, त्यो अब कहिले तन्दूरुस्त भएर कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई रफ्तारका साथ अगाडि बढाउंछ, कसैले अडकल गर्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो बेला समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा गहन दायित्व अर्थमन्त्रीमा निहित हुन्छ । किनकी देशको अर्थतन्त्रको ‘केन्द्रिय पात्र’ अर्थमन्त्री हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा जत्तिको अर्थतन्त्रको ज्ञाता नेपालमा कमै छन् । अर्थशास्त्रीहरुले भन्ने गरेको ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ देखि ‘म्याक्रो म्यानेजमेण्ट’ सम्म, घरेलु उत्पादन प्रकृयादेखि दाताहरुको मनस्थिति बुझेर उनीहरुलाई आफ्नो कुरा बुझाउन सक्ने अर्थशास्त्रीको रुपमा खतिवडालाई लिने गरिन्छ । खासगरि गर्भनर हुंदा उनले देखाएको कार्य कुशलता देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिर पनि हुने गर्छ ।
गभर्नरको रुपमा खतिवडाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जुन सुधार गरे, उनी अर्थमन्त्री भएपछि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यस्तै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो अनुसार सुधार हुन सकेन । आम नेपालीहरुमा खतिवडालाई मात्रै होइन, सिंगै नेकपाको सरकारप्रति नै वितृष्णा बढाउनुको एउटा मुख्य कारण उनको असफलताले काम गरेको छ भन्नेमा अन्यथा नहोला ।
उनलाई विगतदेखि नै चिनिरहेका धेरै मानिसहरुले अहिले आफू आफूसंग सोध्ने गरेको प्रश्न हो—खतिवडाले काम गर्न सकेनन् कि सोचें अनुसार गर्न पाएनन् ?
खतिवडाको एउटा कमजोरी के हो भने उनी अहिलेको अवस्थामा आफू वाहेक अरु कोही जान्ने छन् भन्ने ठान्दै ठान्दैनन् । अरु सबै विषयका कुरा सुन्ने धैर्यता भए पनि अर्थतन्त्रको बारेमा कसैले अलिकति गंभिर सुझाव दिन चाह्यो भने पनि सुन्ने धैर्यता राख्दैनन् । हत्तपत्त आफ्नो कुरा राख्छन् र त्यसैलाई निष्कर्षको रुपमा लिन्छन्, सुझाव दिन चाहानेहरुलाई उल्टै पाठ पढाएर फर्कादिन्छन् । त्यसले गर्दा खतिवडाले आम मानिसहरुको मनोभावना कति बुझ्छन् त्यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै ‘पात्र र प्रवृत्ति’हरुको बारेमा सबै कुरा थाहा छ भन्ने भ्रम पाल्नु खतिवडाको मुख्य कमजोरी हो । मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने, हरेक घटनाक्रमको बारेमा अद्यावधिक भैरहने कार्यशैलीले खतिवडालाई अरु अर्थशास्त्रीहरुलाई भन्दा धेरै कुरा छ, थाहा हुन्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर, देशका हरेक तह र तप्काका नागरिकको समस्याहरुको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, मैले गरेपछि जे पनि ठीक हुन्छ भन्ने जुन भ्रम उनमा देखिन्छ, त्यसको मूल्य अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ ।
किनकी अर्थमन्त्रालयले बनाउने गरेको बजेट, आर्थिक ऐन, नियम र आर्थिक परिदृश्यहरुले आम मानिसहरुलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न नै सकिरहेको छैन । हो, खतिवडाले यो अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि केही ठोस कदमहरु चालेका छन् । राजश्व चुहावट नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन पालनको लागि केही प्रयासहरु गरेका छन् । तर, त्यतिले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र सुधार हुनको लागि करदाताहरुमा विश्वांसको वातावरण हुनु पर्छ । एक पछि अर्काे गर्दै भ्रष्टाचारका घटनाहरु सार्वजनिक हुनु, फजुल खर्च नियन्त्रणमा प्रभावकारी कामहरु हुन नसक्नुले गर्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको कुरामा शायद खतिवडा आफै पनि असहमत छैनन् । आम नागरिकहरुले सबैभन्दा बढी आपत्ति जनाएको सांसद विकास कोष खारेज गर्ने बारेमा अर्थमन्त्री सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भए पनि नेतृत्वको दवावमा सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै माथिल्लो तहबाट हुने गरेका फजुल खर्च नियन्त्रणमा पनि उनी चुकिरहेका छन् । विभिन्न निहुंमा प्रदान गरिने भत्ताहरु, महंगा सवारी साधन उपभोगमा कटौती गर्नुपर्ने जस्ता अनेकौं विषयमा उनी चुकिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा थमौति पाउने लोभमा उनले प्रधानमन्त्री के पी ओली मात्र होइन, उनी नजिकका नेताहरु र उनको सचिवालयका अधिकारीहरुको ‘आदेश’लाई पनि शिरोपर गरेर लागू गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो स्वंय नेकपाको वृतमा सुन्ने गरिएको छ । त्यसको अर्थ के हो भने खतिवडा देशको अर्थमन्त्री कम र ‘ओलीको किचन क्याविनेट’को अर्थमन्त्री बढी देखिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको विश्लेषण र कार्यान्वयनमा पार्टी भन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई हेरेर काम गर्नु पर्नेमा गुट र त्यसका पनि केही सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै हेरेर निर्णय गर्ने खतिवडाको कार्य शैली नै अहिलेको अर्थतन्त्रको लागि मुख्य चुनौति हो । यदि खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा पुर्ननियुक्ति पाए पाउंछु, नपाए पाउंदिन, अर्थमन्त्रीमा टिके पनि नटिके पनि काम गरेरै देखाउंछु भनेर विगत केही महिनादेखि काम गरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र अर्कै दिशामा गैसक्ने थियो । कोरोना भाइरसले पारेको असर पनि अहिलेको तुलनामा निकै कम हुने थियो भन्नेमा शायद शंका गर्नु पर्दैन । तर, दुर्भाग्य खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा टिकिरहनको लागि देश र पार्टीभन्दा प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेको आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिंदा अर्थतन्त्रमा गंभिर संकटहरु देखा परेका छन् । यसबाट पाठ सिकेर खतिवडाले यही असार महिनादेखि नै कडाइका साथ आफूलाई उभ्याउने हो भने देशको अर्थतन्त्र लिकमा आउनको लागि धेरै समय लाग्ने छैन । किनकी समस्या कोरोनाको होइन, अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्ने जिम्मेवारी बोकेका खतिवडा र सरकारको उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको नियत हो ।
बार्सिलोनाको शानदार जितमा रियल स्तब्ध आइतवार, कार्तिक ३, २०७६, ०७:५१:००
बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याइने सोमवार, पुष २८, २०७६, १३:१३:००
हेर्नुहोस्, तपाईको आजको राशिफल शनिवार, आश्विन ४, २०७६, ०६:१२:००
सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको सरोकार र अबको राष्ट्रिय कार्यभार
कर विवाद समाधानको मध्यमार्गी बाटो